राजन थपलियाको पुस्तक ‘१०० प्रतिशत लाईफ’ सगरमाथामा बिमोचन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राजन थपलियाको पुस्तक ‘१०० प्रतिशत लाईफ’ सगरमाथामा बिमोचन
न्यूयोर्क । लेखक राजन थपलियाको पुस्तक ‘१०० प्रतिशत लाईफ’ विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथामा बिमोचन भएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका युवा लेखक राजन थपलियाको पुस्तक ‘१००%’ पुस्तक बिमोचन भएको हो। ‘१००%’ पुस्तकको दोश्रो संस्करणमा प्रकाशित भएको उक्त पुस्तकमा ५ अध्याय थपिएका छन्।
गत शुक्रबार अन्तराष्ट्रिय हिमाल मार्गदर्शी आङ दावा शेर्पाले ६ पटक विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथामा सफलता पूर्वक पाइला टेके। साथै थपलियाको चर्चित कृति शतप्रतिशत जीवनलाई सगरमाथामा बिमोचन गरियो।
‘१०० प्रतिशत लाईफ’ पुस्तक सगरमाथामा बिमोचन गरिएको नेपाली आप्रबासीको यो पहिलो पुस्तक हो। उक्त पुस्तक नर्थ क्यारोलिना अमेरिकाको लुलु छापाखानाबाट प्रकाशित भएको हो।
मान्छेको जीवनको हरेक पाटोलाई विश्लेषण गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा जीवनलाई कसरी रुपान्तरण गर्ने, आफूलाई कसरी मानसिक रुपमा बलियो बनाउने भन्ने कुरालाई पुस्तकमा बिशेष जोड दिइएको छ।
सय प्रतिशत जीवन किताबको शीर्षकले भने जस्तै मानिसलाई जीवन सत प्रतिशत बनाउन पर्ने तत्वहरु र कसरी बनाउने भन्ने कुरा पुस्तकमा देखाइएको छ।
उक्त किताब २ सय ५६ पन्नाको रहेको छ । पुस्तकको विषयमा लेखक राजन थपलिया भन्छन्, ‘यो साहसीहरुले पढ्ने पुस्तक हो। परिवर्तनमा बिश्वास गर्नेहरुले पढ्ने किताब हो।
हिजो जे भयो भयो अब आजबाट बदलिन चाहनेहरुले पढ्ने किताब हो। सपना भनेको ठूलो देख्नुपर्छ, यदी जीवनमा ठूलो काम गर्नु छ भने। सबै सपनाहरु पुरा हुँदैनन् इच्छा शक्ति कमजोर भएमा।’
ठूला ठूला पहाडहरुलाई पनि छिचोलेर खोला बगी नै रहन्छ , त्यो पानीको शक्तीले होइन त्यो अबिरल बगी रहने पानीको निरन्तरताले भएको लेखकले बताए।
उक्त किताबको दोस्रो संस्करण मे ९ तारिखदेखि बजारमा उपलब्ध छ। उक्त पुस्तक अमेजन्, इबे तथा बार्न्स एन्ड नोबेलमा उपलब्ध रहेको छ।थपलिया खुट्टा–पैताला चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थी हुन्।
पूर्ण कालिन लेखनमा ब्यस्त थपलिया आफूलाई लेखक भन्दा पनि राम्रो पाठक भन्न रुचाउँछन्। धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा थपलियाको हालसम्म जीवन विज्ञानमा आधारित दर्जन पुस्तक प्रकाशन भइसकेका छन्।
राजनका अन्य पुस्तकहरु थिङक एबाउट इट, सिम्पल रुल्स, टर्निङ प्वाईन्ट, चेन्ज योर्स फ्युचर्स, इन आवर कन्ट्री, द ओल्ड म्यान एण्ड डग, द सेक्रेट मिलेनियर, लाईफ ईज नट ईजी, रिजोईस, रिजोईस टु, स्वीट स्पिचेस, हन्ड्रेड पर्सेन्ट लाईफ र फिफ्टी फाइव ईयर्स हुन्।
झण्डै १५ बर्ष किशोरावस्थादेखि नै लेखन कार्यमा लागेका थपलियाका अप्रकाशित केही पुस्तकहरु पनि तयारी अवस्थामा छन्। थपलियाको लेखन सेल्फ हेल्प (आत्मा) मोटिभेशन (उत्प्रेरणा) र नोभल (उपन्यास)मा केन्द्रीत रहेको छ।